မန္တလေးပြီးမှ ရန်ကုန်ဆိုတာ ကျေကျေနပ်နပ်ကြီးလက်ခံလိုက်ပါပြီဆိုတဲ့ ယုန်လေး – အနုပညာရပ်ဝန်း
မန္တလေးပြီးမှ ရန်ကုန်ဆိုတာ ကျေကျေနပ်နပ်ကြီးလက်ခံလိုက်ပါပြီဆိုတဲ့ ယုန်လေး
ယုန်လေးကတော့ လတ်တလောမှာ ဂီတဝါသနာရှင်မျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေကို လက်တွဲခေါ်ယူနေရုံမက ချို့တဲ့နေသူတွေကို ဆက်တိုက်ကူညီနေသူမို့ ပရိသတ်တွေအချစ်ပိုနေရသူတစ်ယောက်ပါ။ သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာလည်း တနေ့တာအကြောင်းအရာနဲ့ ခံစားချက်တွေကို ဆက်တိုက်မျှဝေပေးလေ့ရှိသူရှိပြီး ဒီနေ့မှာတော့ မန္တလေးမြို့နဲ့ပတ်သက်ပြီး ကြည်နူးပီတိဖြစ်နေပုံကို မျှဝေခဲ့ပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းက အမရပူရ တာရိုးကျိုးပေါက်သွားခဲ့တဲ့အပေါ်မှာ ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးသာမက ရေဘေးသင့်ပြည်သူတွေအတွက် ဝန်ကြီးချုပ်၊မြို့တော်ဝန်နဲ့ အလှူရှင်တွေ ပြည်သူတွေ စစ်သားတွေတက်ညီလက်ညီ ကူညီနေမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး ” ဂုဏ်ယူပါတယ် Mandalay . လေးစား ပီတိ ဖြစ်မိပါတယ်ဗျာ .Respect ပါ… တစ်နိုင်ငံလုံး Mandalay လိုတွေဖြစ်ရင် .အမေ့သားတွေ အကုန် ဦးဇော်မြင့်မောင် . ဦးရဲလွင်ဆို ကျွန်တော်တို့တွေ ပိုပျော်ရပြီ .ဒီမြင်ကွင်းလေးက အတော်ကျက်သရေရှိပါတယ် .ဘုန်းဘုန်း ရှင်ဆေကိန္ဒ ကလည်း ရေဘေးသင့် လူ(၅၀၀၀)ကို ထမင်းတွေကျွေး . စစ်တပ်ကလည်း ဝိုင်းကူ…. စည်းလုံး ခြင်းသည် အင်အားဆိုတာ ဒါပါ .အဲ့လို တွေ စည်းလုံး ညီညွတ်ချင်ပြီ .
အရင်တုန်းကတေ့ ရန်ကုန်သား ဘာညာပေါ့ ကိုယ်လည်း သွေးတိုးနဲ့ . အခုတော့ ဝန်ခံပါတယ် .Mandalay ပြီးမွ Yangon ဆိုတာ ကျေကျေနပ်နပ်လက်ခံပါတယ်….အားလုံး Peace ” ဆိုပြီး ရင်ထဲကခံစားချက်တွေကို မျှဝေခဲ့ပါတယ်။ မထင်မှတ်ဘဲ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ဘေးဒုက္ခအန္တရာယ်ကို ပြည်သူတစ်ရပ်လုံးတက်ညီလက်ညီ ဝိုင်းဝန်းကူညီနေကြတဲ့ မြင်ကွင်းလေးတွေကတော့ တကယ်ကို ကြည်နူးစရာပါပဲ ပရိသတ်ကြီးရေ… ယုန်လေးကတော့ လူညီလွန်းတဲ့ မန္တလေးမြို့ကလူတွေကို ဂုဏ်ယူလေးစားကြောင်း သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာ မျှဝေခဲ့တာပါ။
Source -Yone Lay
လက်ရှိအချိန်တွေကို သားလေးနဲ့ပဲ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဖြတ်သန်းနေတဲ့ မေမေ မယ်လိုဒီ
ဦးမန်းဝင်းအတွက်ရည်စူးပြီး အောင်သော်ရဲ့ GMW ကယ်ဆယ်ရေးအသင်းမှာ လှူဒါန်းပေးခဲ့တဲ့ ကျန်ရစ်သူမိသားစု